Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Doorka Isbedelka Cimilada ayaa hadda ka ciyaara Kordhinta Heerarka Xasaasiyadda
Dib-u-eegis dhowaan la sameeyay ayaa iftiimisay ka qayb qaadashada is-beddelka cimilada iyo wasakhowga hawada ee cudurrada neef-mareenka.
Isbeddelka cimilada, oo ka muuqda heerkulka sare u kaca, wasakhowga curyaamiyey, daadad xun, iyo abaaro ba'an, ayaa saameeya malaayiin qof oo adduunka ah. Korodhka heerarka xasaasiyadda neef-mareenka ee wasakhaysan sida neefta, rhinitis-ka, iyo qandhada cawska sannadihii u dambeeyay waxa qayb ahaan loo nisbayn karaa saamaynta isbeddelka cimilada. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la darsay saamaynta gaarka ah ee heerkulka sare u kaca iyo wasakhowga hawada ee cudurradan xasaasiyadeed, dulmar guud oo ku saabsan sida ay arrimahani midba midka kale u saameeyaan ilaa hadda lama helin.
Dib-u-eegis lagu daabacay Jariidada Caafimaadka Shiinaha 5-tii Luulyo 2020, cilmi-baarayaashu waxay soo koobeen kakanaanta sida isbeddelka cimilada, wasakhowga hawada, iyo xasaasiyadda hawada sida manka iyo xabkaha si isku mid ah uga qaybqaataan cudurrada neef-mareenka. Waxay ka wada hadlayaan sida isbeddelka cimiladu, oo ay ku jiraan heerkulka aadka u daran, ay si toos ah u saameyn karaan mareenka neefsashada oo ay u keeni karaan cudurrada xasaasiyadda. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale muujinayaan doorka masiibooyinka dabiiciga ah sida onkodka, daadadka, dabka duurjoogta ah, iyo duufaannada boodhka si ay u kordhiyaan jiilka iyo qaybinta xasaasiyadaha hawada ka soo baxa iyo yaraynta tayada hawada, taas oo si xun u saameeya caafimaadka aadanaha. Maqaalka oo kooban ayaa lagu soo bandhigay muuqaal YouTube ah.
Guud ahaan, dib u eegistu waxay ka digaysaa khataro caafimaad oo weyn mustaqbalka taasoo ay ugu wacan tahay saamaynta is-dhaafsiga iyo isku dhufashada ee kulaylka iyo xasaasiyadda hawadu ka qaado wasakhowga hawada. "Saadaashayadu waxay muujinayaan in heerarka walxaha qayb ka ah iyo ozone ee hawadu ay kordhin doonaan kulaylka cimilada, heerkulka kor u kaca iyo heerarka CO2 waxay kor u qaadi karaan heerarka xasaasiyadda hawada ka soo baxa, kordhinta khatarta cudurrada neef-mareenka," ayuu yiri Prof. Cun-Rui Huang, oo hormuud ka ahaa daraasadda.
Si wada jir ah, warbixintani waxay u adeegtaa sidii tallaabo loogu yeero cilmi-baarista, horumarinta, iyo dadaallada u doodista ee xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, iyaga oo dhidibada u aasaya istaraatiijiyado caafimaad oo dadweyne oo waxtar leh. "Tillaabooyinka qorsheynta magaalada ee fudud sida abuurista aagagga wasakhowga hawada hoose ee agagaarka aagagga la deggan yahay, beeritaanka dhirta aan xasaasiyadda lahayn, iyo gooynta deyrarka ubaxa ka hor waxay yareyn kartaa soo-gaadhista sunta waxayna yareyn kartaa khatarta caafimaadka. Nidaamyada la socodka iyo digniinta cimilada ayaa sidoo kale ka caawin kara mas'uuliyiinta inay ka difaacaan dadka nugul sida dadka deggan magaalooyinka iyo carruurta cudurradan oo kale," ayuu yiri Prof. Huang, isagoo intaa ku daray in hababkan oo kale ay muhiim u yihiin dhimista saameynta caafimaad ee cudurrada xasaasiyadda neef-mareenka mustaqbalka.
Runtii, dadaal wadajir ah ayaa loo baahan yahay si loo dhowro xaqa qofka u leeyahay in la neefsado hawo nadiif ah.
Bandhigyada TV-ga ee ay ugu jecel yihiin Brits ayaa hadda wax ku kordhinaya iscasilaadii weynaa